Inona no azon'i Apple atolotra amin'ny Apple TV | Vaovao IPhone
Toa izao no eny, na farafaharatsiny izany no tadiavin'ny maro amintsika: hisy Apple TV vaovao amin'ny volana Jona, miaraka amin'ny magazay fampiharana ary misy fantsom-pifandraisana vaovao, ao anatin'izany ny fantsona Apple iray izay hifaninana mivantana amin'ireo mpandraharaha tariby. Tena zava-dehibe tokoa ve ny fanovana izay ataon'ny Apple TV fa efa nisy hatry ny ela? Tsy isalasalana fa eny, na dia hiankina amin'izay tian'ny Apple hatao aminy aza ny zava-drehetra. Ohatra iray fotsiny no asehonay anao ny hevitra sasany izay mety hita taratra amin'ny maodely vaovao ary mety ho baomba tena izy eo amin'ny tsena ho an'ny konsol video sy SmartTV.
1 Fivarotana fampiharana
2 Fanaraha-maso lavitra
3 Lalao amin'ny fahitalavitrao
Mahamenatra tokoa ny fananana App Store toa an'i Apple fa tsy mampiasa azy amin'ny Apple TV. Ny fampiharana amin'ny tambajotra sosialy, mpizaha Internet na fampiharana amin'ny fandefasana horonantsary toa an'i Yomvi, Movistar TV, MiTele na Atresmedia izay misy ho an'ny iPhone sy iPad dia tena ilaina amin'ny Apple TV. Tsy isalasalana fa ho fitaovana hanovana ny televiziona ho tena SmartTV izy io. Ireo izay manana ny iray amin'ireo dia azo antoka fa hahatakatra ahy: ny rindranasa misy ho an'ny marika isan-karazany dia, amin'ny ankamaroan'ny tranga, mampalahelo, miaraka amina rindrambaiko mahatsiravina sy miaraka amin'ireo rafi-pitaterana menio izay mahatonga azy ireo tsy hisy ilana azy. Apple dia afaka nanararaotra ny fampiharana natokana ho an'ny iPhone sy iPad ary hahatratra ny traikefan'ny mpampiasa ambony lavitra noho izay atolotry ny ankamaroan'ny fahita fahitalavitra.
Singa iray lehibe hahombiazan'ny Apple TV ny fampiasana ny remote control mihoatra ny fanovana fantsona na hiverina amin'ny alàlan'ny menio. Ny iPhone dia azo ampiasaina hifaneraserana amin'ny Apple TV, fa ny fifehezana ny Apple TV nohavaozina kosa dia mety ho ny fifandraisana mifanentana eo anelanelan'ny a fanaraha-maso pad ho an'ny fampiharana, fitendry ary gamepad ho an'ny lalao (izay horesahintsika avy eo). Izy io koa dia mety ho tondro ampiasaina amin'ny televizionantsika, ahafahana manindry bokotra mivantana miaraka amin'ny lavitra.
Lalao amin'ny fahitalavitrao
Ny zavatra tsara indrindra momba ny Apple TV dia tsy isalasalana fa ny lalao console lalao. Miaraka amin'ny katalaogin-dalao video izay ananan'i Apple ao amin'ny magazainy, dia toa tsy mampino fa mbola tsy nanapa-kevitra ny hanao ny dingana amin'ny televiziona izy. Ny iPhone 6 Plus dia manana vahaolana 1920 × 1080, izay mifanentana tanteraka amin'ny fahitalavitra Full HD. Izay lalao ampifanarahana amin'ny iPhone 6 Plus dia azo lalaovina amin'ny famaritana avo amin'ny fahitalavitra ary fehezin'ny fanaraha-maso lavitra miaraka amin'ny bokotra ara-batana, araka ny tokony ho izy.
Tsy niresaka momba ny famolavolana isika, fa ireo maodely noforonin'i Martin Hajek afaka tafiditra tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny rehetra izy ireo. Ny fanaraha-maso lavitra amin'ny fomba iPod nano miaraka amin'ny efijery mikasika sy bokotra ara-batana amin'ny lafiny iray hafa dia tsara tarehy izy ary vahaolana tonga lafatra hahatonga azy io ho "rehetra-amin'ny-iray" ho an'ny fifehezana lalao multimedia sy lalao video. Ny loko dia ireo efa ananan'i Apple ho ofisialy: volafotsy fotsy, fotsy mainty ary fotsy-volamena. Avelako miaraka amin'ny galeriana misy sary bebe kokoa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Izay azon'i Apple atolotra amin'ny Apple TV vaovao
Manantena aho fa tsy ho milanja taratasy toy ny farany ity iray ity.
Gaga be aho ny herinandro lasa teo rehefa nividy fahitalavitra Apple 5 tao amin'ny magazay Apple ny mpanjifa. Fahadisoam-panantenana re rehefa apetrako amin'ny asany na rehefa manandrana manao JB aho
Ilay hacker Majd Alfhaily dia miondrika an-tsokosoko ao amin'ilay iPhone nigadra nataonao "Brute Force"